Xiaomi Mi 10 T Pro, oo calaamadeynaysa bilowga dhammaadka-dhamaadka [Falanqaynta] | Androidsis
Xiaomi Mi 10 T Pro, oo calaamadeeyay bilowgii dhammaadka-dhamaadka [Falanqaynta]
Kala duwanaanshaha taleefanka gacanta ayaa sii kordhaya, inkasta oo aan caddaynayno inay jiraan laba qaybood oo kala qaybsan oo ku sii yaraanaya danaha isticmaalayaasha ugu caansan, heerarka hoose iyo kuwa waaweyn. Dhexdhexaadku wuxuu u kala jabay si uu u bixiyo astaamo farsamo oo macquul ah qiime jaban, waana halkaas meesha Xiaomi badiyaa dhalaala.
Nagala soo baar dhamaan awoodaha cusub ee Xiaomi Mi 10 T Pro.
3 Soo bandhig iyo khibrad warbaahin badan
4 Is-maamul iyo kamarad
6 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
Waxaan ku bilaabaynaa furitaanka sanduuqa Xiaomi Mi 10 T Pro, oo habka, wuxuu ku jiraa qiimo aad u xiiso badan oo ka hooseeya 500 euro hadda Amazon. Munaasabaddan Xiaomi waxay markale ku sharraxday muraayad dhalaalaysa dhabarka, Runtuna waxay tahay in kasta oo raadadka badani ay soo saaraan, haddana aad ayaan u jecel nahay. Qeybtan dambe, oo ku xardhan afarteeda qaybood, moduleka kamaradda ee bidixda kore ayaa taagan, laga yaabee inuu ka mid yahay kuwa ugu caansan suuqa. Tani dhibaato ayey noqon kartaa haddii aan moobilka miiska saarno iyadoo shaashaddu kor u soo jeedo.
Qalabkani waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna culus ee u dhigma, waxaan xasuusnaano inaan leenahay 165 * 76,4 * 9,3 milimitir marka loo eego cabirka oo aan ka yarayn 218 garaam. Shaashadeeda 6,67-inch uma muuqato mid si weyn u weyn, hase yeeshe, waxaan leenahay xoogaa cufan cufan ah marka loo eego noocyada kale. In kasta oo wax waliba jiraan, haddana waa ku raaxeysaneysaa gacanta, waxay dareemeysaa xoog laakiin sidoo kale waxay siinaysaa dareenka ah in si dhammaystiran loo dhisay. Dhinaca hore oo leh muraayaddeeda 2,5D ayaa iftiimineysa freckle aagga bidix ee kore ee kamaradu ku taal sawiro
Uma muuqato in heer farsamo aan wax badan uga maqnaan doonno tan Xiaomi Mi 10 T Pro taas, sidaan soo sheegnay, waxay rabtaa inay dhigto aasaaska a "qiimo jaban" heer sare ah. Taasi waa sababta uu u doorto Qualcomm iyada oo si fiican loo yaqaan Snapdragon 865 kaas oo la socda modem 5G ah. Xagga RAM-ka, iyagu iskama yareeyaan, waxay ka doortaan 8 GB xasuusta LPDDR5X meesha ugu badan "suuqa", sida ay tahay keydka guud, halka ay sharad ku galaan 128 ama 256 GB wadar ahaan laakiin leh tikniyoolajiyadda UFS 3.1 ugu dhaqsaha badan suuqa.
Faahfaahinta farsamada Xiaomi Mi 10 T Pro
Tusaale Mi 10 T Pro
Nidaamka hawlgalka Android + MIUI 12
Screen IPS LCD 6.67 inji FHD + at 144 Hz iyo 650 nits - HDR10 - Qiyaasta 20: 9
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 865
Kaydinta gudaha 128/256 UFS 3.1
Kaamirada gadaal 108 MP f / 1.69 + xagal ballaadhan 13 MP f / 2.4 + Macro 5MP f / 2.4 + Dareemaha Dareemaha
Kaamirada hore 20 MP f / 2.2
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 - 5G - WiFi 6 - NFC - IR
Batariga 5.000 mAh oo leh Eedeyn Degdeg ah 33W
Sidii aan nidhi, astaamaheeda farsamo iyo awoodeeda waxay umuuqataa inay dooneyso inay gebi ahaanba waxba ka tagin, waxaan leenahay xasuus aad u dhakhso badan iyo processor ka mid ah solvency la aqoonsan yahay.
Soo bandhig iyo khibrad warbaahin badan
Sida gudiga, waxaan ku bilaabaynaa dhadhanka udgoon ee ugu horeeya. Waxaan leenahay cabir aad u badan oo ah 6,67 inji oo aan haba yaraatee wax xun ahayn, laakiin xaqiiqda haysashada akhristaha faraha ee dhinaca ayaa horeyba nooga digay inaan leenahay guddi IPS LCD ah. Iyadoo ay taasi jirto, waxaan haysannaa in kabadan xallinta FullHD +, ahaa sida heerka cusboonaysiinta ee 144 Hz waa la hagaajin karaa oo na siinaysa khibrad aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan leenahay cilladaha ku jira guddi noocan ah sida hooska qaarkood ee geesaha ama ku xiga kamaradda sawir-qaadashada, iyo sidoo kale iftiin bannaanka ka baxsan oo inkastoo 650 nits, waxay umuuqataa inaysan nagu filneyn.
Isbarbardhiga wanaagsan iyo xulashada midabada
Cilladaha dabiiciga ah ee shaashadda IPS LCD
395 pixels halkii cabbir inji
Dhinaceeda, waxaan leenahay labo kuhadal idaacado, oo aan la xaqiijin iswaafajinta Dolby Atmos. Waxaa loo maqlaa si sare oo cad oo ku filan si ay ugu raaxaystaan ​​waxa ku jira inkasta oo ay ka maqan yihiin kor u qaadis baasa oo aad u muuqda ayna muujinayaan dhawaq yar oo qasacadaysan. Si kastaba ha noqotee, waa la mahadiyey inay ku sharaddeeyaan codka stereo, wax ka yar oo ka yar joogitaanka Xiaomi.
Is-maamul iyo kamarad
Kaamiradu waa qaybta ugu horeysa ee aan ku ogaanayno inaan wajaheyno qalab tilmaamaya oo tooganaya dhamaadka sare, iyada oo aan noqonin terminal astaamahan si sax ah. Waxay u taagan tahay waxqabadkeeda mahadnaqda dareemayaasha ay shirkaddu ku sharraxayso oo aan falanqeyno:
Ugu weyn 108 megapixels (1 / 1,33 inji, 1,6 μm pixels) oo leh aperture f / 1.69 iyo aag muuqaal ah 82º. Waxay leedahay xasilinta muuqaalka muuqaalka ee duubista sawirka. Dareemahan ayaa mararka qaarkood la xanuunsada sawir-qaadista dhabarka dambe wuxuuna na siiyaa natiijooyin wanaagsan oo guud. HDR si xoog leh ayuu ku yimaadaa inkasta oo aan kugula talinayo in la kiciyo si loo badbaadiyo cirka guban.
Xagasha Wide Ultra 13 megapixel (1,12 μm pixels) oo leh f / 2.4 aperture iyo 123º aragtida, waxay bixisaa natiijo guud oo wanaagsan, isku dheelitirkeeda cad waa mid deggan, in kasta oo aynaan helin faahfaahinta caadiga ah ee 13 lens MP iyo iftiin la'aan waxay muujin doontaa buuq fara badan.
Macro 5MP oo leh fur f / 2.4
sawir oo ah 20MP oo leh furfurnaan f / 2.2 oo bixisa natiijo si fiican loo barbardhigo, oo leh dhacdooyinka xad dhaafka ah ee caadiga qaabka quruxda xitaa marka loo eego safkeeda ugu yar.
Sida duubista fiidiyowga, waxaan kuheleynaa xasillooni wanaagsan oo kamaradda weyn ah, waxaan ilaawnaa xasilinta oo waxaan dib ugu laabaneynaa wixii hore ee dareemayaasha. Waxaan ku haynaa natiijooyin wax ku ool ah Habka habeenkii otomaatiga ah Iyadoo muraayada weyn, waxaan dooranay buuq badan markaan kahadalno kamaradaha intiisa kale, runti, xitaa sawirku wuxuu kuhelaa natiijooyin wanaagsan iftiinka hoose marka loo eego muraayada 'Ultra Wide Angle lens'.
Ku saabsan madax-bannaanida, waxaa laga filayaa batari weyn oo ah 5.000 Mah. Waxay noo ogolaaneysaa inaan si buuxda ugu raaxeysanno 144 Hz ee shaashadda, waxaan helnaa inta u dhexeysa 7 iyo 8 saacadood oo shaashad ah iyadoo ku xiran nooca isticmaalka aan siino boosteejada, ugu yaraan tan ayaa ka muuqatay tijaabooyinkeenna. Is-xukunka ayaa si gaar ah looga faa'iideystey haddii aan ka tagno 144 Hz illaa 90 Hz heerka cusbooneysiinta, wax ku dhaca caqliga dhexdiisa.
Degdeg deg ah ayaa na siineysa suurtagalnimada inaan gaarno wax ka badan 60% nolosha batteriga nus saac iyada oo loo marayo 30W USB-C xeedho taas ayaa ku jirta xirmada. Si aan u rarno terminaalka oo dhameystiran waxaan u baahan doonaa wax ka badan saacad.
Terminalka waxay soo bandhigtay waxqabad aad u fiican oo ku saabsan ka shaqeynta waxyaabaha ka kooban, ciyaaraha fiidiyowga iyo dabcan inta ka hartay howlaha maalin kasta. Xawaaraha ay ku leedahay xusuustiisa iyo waliba astaamaha farsamo ayaa na siinaya khibrad heer sare ah. Waxaan xisaabta ku dareynaa inaan heysanno 5G chip In kasta oo aynaan awoodin inaan xaqiijino natiijada hawlgalkeeda maadaama ay ka maqan tahay isku xirnaanta noocan ah inta badan, haddaba markay aragto astaanta "5G" oo marba marka ka dambaysa ka muuqata baarka sare kuma filna inay kugu siiso xukun qiime marka loo eego waxqabadkeeda, maahan sidaas WiFi 6, taasi waxay bixisaa waxqabad aad u sarreeya, sida aad filan lahayd.
Dhinaca kale, waxaan haysannaa xoogaa xusuusin ah inaan hal talaabo ka hoos marayno heerka ugu sarreeya, Tusaale ahaan, waxay ku dhacdaa tayada codka, taas oo aakhirka aan na siinaynin waayo-aragnimo aad u kobcinaysa, iyo sidoo kale kamaradaha, isla marka aad dalbato xaalado aan fiicnayn, waxay bilaabayaan inay dhibaatooyin la kulmaan si ay natiijooyin ugu siiyaan ciyaar. Iyada oo ay taasi jirto, waxay na siineysaa waxyaabo aad u xiiso badan oo lagu daray noocyo badan oo tixgelin ah nooca dareemayaasha iyo barnaamijka kaamirada caanka ah ee Xiaomi, oo si weyn kor ugu qaadaya khibrada guud ee ereyadan.
Dhinaceeda, gudiga IPS LCD Waxa kale oo ay iiga tagtay dareen qadhaadh, oo bixinaya heer cusbooneysiin otomaatig ah oo naxariis darro ah, isla sidaas ayaa ku dhacda xallinta iyo hagaajinta midabada, gebi ahaanba waa lagu guuleystay aragtidayda. Waxyaabaha ayaa isbedelaya markaan aragno hooska joogtada ah ee xaglaha shaashadda iyo hareeraha kore, wax aan ku habboonayn terminal-ka oo qiimihiisu uu ka batay lix boqol oo euro. Tani waxay hoos u dhigi kartaa waayo-aragnimada "qiimaha", in kasta oo ay jirto guddi kale oo laga masayrin karo. Khibradda kaftanku way fiicneyd, labadaba dareeraha faraha ee ku yaal dhinaca iyo aqoonsiga wajiga.
Terminalku si wanaagsan ayuu u dhisan yahay wuxuuna naga dhigayaa shaki haddii aan runtii ku jirno meelaha ugu sarreeya ama aan ku jirin, si kastaba ha noqotee, waa faahfaahinta yar yar ee ku xusuusinaysa haddii aad ka horreyso 1.000 euro terminal ama 600 euro one. Waa run in laga yaabo in kala duwanaanshaha qiimaha uusan magdhow bixin doonin faahfaahintaan, laakiin taasi waxay ahaan doontaa oo had iyo jeer noqon doontaa farqiga u dhexeeya dhamaadka-sare iyo heer aad u wanaagsan oo lagu guuleystay, oo dhanka kale ah, aadan joojinayn bixinta iyadoo la tixgelinayo qiimaha tan Xiaomi Mi 10 T Pro, taas oo, si kastaba ha noqotee, gabi ahaanba kama maqnaan doontid wax.
Dhismo wanaagsan iyo raaxo
Heerka cusbooneysiinta wanaagsan iyo hagaajinta shaashadda
Waxay leedahay wax kasta oo ku jira qalabka iyo awoodda
Shaashadda LCD oo leh hooska iyo dhawaqa dhexdhexaadka ah
Kaamirooyinka ayaa ka fog dhamaadka sare
MIUI wali waxay leedahay xayeysiis iyo bloatware
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Xiaomi Mi 10 T Pro, oo calaamadeeyay bilowgii dhammaadka-dhamaadka [Falanqaynta]
5-da kulan ee ugu fiican ee loo yaqaan 'spaceship games' ee loogu talagalay Android
Barnaamijyada xujo carruurta ugu fiican ee Android